अर्को वर्ष, अर्को माइलस्टोन, अर्को असाधारण अनुभव ... त्यो मेरो लागि YII2019 थियो! - Geofumadas
अर्को वर्ष, अर्को माइलस्टोन, अर्को असाधारण अनुभव ... त्यो मेरो लागि YII2019 थियो!
अक्टुबर, 2019 नवाचारै, Microstation-बेन्टले
जब मलाई भनियो कि मसँग यस बर्षको सब भन्दा ठूलो इन्फ्रास्ट्रक्चर घटनाको सहभागी हुनको लागि अर्को मौका हुनेछ, यसले मलाई खुशीले चिच्यायो। YII2018 लन्डनमा, मेरो मनपर्ने छुट्टी गन्तव्यहरू बाहेक, बेंटले सिस्टम, टोपकन र अन्यबाट शीर्ष अधिकारीहरूसँगको अपवादात्मक अन्तर्वार्ता, गतिशील व्याख्यान र अत्यधिक सूचित सत्रहरूको अभूतपूर्व अनुभव थियो। बेंटले प्रणालीले "डिजिटल जुम्ल्याहा" को अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्यो र निर्माण उद्योगमा क्रान्तिको साक्षी दिन कुन राम्रो तरिका निर्माणकर्ताहरूसँग नहुनु भन्दा राम्रो हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर मेक्काले लगभग सबै उद्योगका चिन्तित नेताहरूलाई सँगै ल्याएको थियो र ज्ञान साझेदारी, नेटवर्कि and र सहकार्य भएको कुरा शव्दहरू भन्दा पर थियो।
निर्माण उद्योगको बारेमा लेख्नको लागि मेरो उत्कट इच्छा बढाउन म सही ठाउँमा थिएँ। डिजिटल एडभान्समेन्ट एकेडेमीबाट केसहरू प्रयोग गर्न, म सबै कुरा मेरो स्मृतिमा कब्जा गर्न चाहन्छु र त्यसपछि यसलाई एउटा अनौंठो कथामा बदल्न चाहन्छु। पूर्ण ज्ञान, एक पटक पहिले म मेरो पाठकहरु को लागी केहि सम्मोहक लेखन सिर्जना गर्न सक्षम भयो। अर्को वर्ष निर्माण उद्योग stalwarts पूरा गर्न इच्छा जीवित र राम्रो थियो, सबै अधिक किनभने सिंगापुर घर को धेरै नजिक छ।5घण्टा र minutes 55 मिनेट उडान समयको साथ, म यो मिस गर्न सक्दिन!
यो २० अक्टूबर, २०१ 20 मा आइपुगेको थियो र म सिंगापुरको शानदार मरीना बेअसन्ड्समा थिएँ। जब मैले उनीहरूको छत इन्फिनिटी पोखरी क्षेत्र खोज्यो, मेरो उत्साह दोब्बर भयो। यो आफैंमा एउटा वास्तुको चमत्कार हो, जस्तो कि शपिंग मल्लको साथ एउटा सानो शहर, एक प्रदर्शनी केन्द्र, एक नाइटक्लब, क्यासिनो, फूड कोर्ट र अरू के छैन ...
लामो प्रतीक्षा YII2019 मिडिया दिन अक्टुबर 21 को रमणीय बिहानमा शुरू भयो। अत्यधिक ऊर्जावान प्रेस सम्मेलनले महत्वपूर्ण समाचारहरू उदायो जस्तै:
बेंटले प्रणालीहरू र टोपकोन पोजिशनिंग सिस्टमहरूले उनीहरूको डिजिटल निर्माण संयुक्त उद्यम सुरू गर्छन्।
बेंटले प्रणालीले सिटीलाब र जियोस्पाटियल ऑर्बिट टेक्नोलोजीको अधिग्रहणको साथ डिजिटल शहर प्रस्तावलाई अझ सुदृढ बनाउँदछ।
डिजिटल कन्स्ट्रक्शन वर्क्सले आफ्नो पार्टनर समुदाय र O3 समाधानको साथ साझेदारीलाई उन्नत कार्य प्याकेजिंग सेवाहरूको समर्थनको घोषणा गर्दछ।
जियोफुमाडास यस कार्यक्रममा लगातार ११ बर्ष सम्म उपस्थित भइसकेका छन्, मेरो सन्दर्भमा यो दोस्रो पटक हो र ट्विन जिओ / जियोफुमाडास पत्रिकाको भागको रूपमा पहिलो पटक हो। बेंटले प्रणालीमा वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग द्रुत अन्तर्वार्ता एक रमाईलो अनुभव थियो जसले मेरो अनुभव जुड्यो डिजिटल जुम्ल्याहा, भू-टेक्निकल इन्जीनियरिंग, संरचनात्मक ईञ्जिनियरि,, डिजिटल शहरहरू र अधिकको बारेमा ...
नेटवर्किंग, खाजा र चिया ब्रेकको समयमा पुराना र नयाँ साथीहरूसँगको सम्बन्धले प्रत्येक क्षणलाई रमाईलो बनायो; मैले शाब्दिक रूपमा त्यस ट्वीटमा दिनको सार समातें जुन लोकप्रिय लोकप्रिय भयो।
म यहाँ छु n रमाइलो n हरेक मिनेट विकास गर्दै। दोस्रो वर्ष एक समान रोचक अनुभव हो ☺️ #YII2019 @BentleySystems @ GolgiAlvarez @christinebyrne pic.twitter.com/dNfIUrn82K
- शिमन्ती पॉल (@ शिमन्तीपॉल) अक्टोबर 21, 2019
त्यो दिन बित्यो कि फुलर्टन बे होटेलमा मनमोहक क्लिफोर्ड पियरमा आयोजना गरिएको एक उत्कृष्ट डिनरको अन्त्य भयो।
निम्न दिनहरू, अक्टोबर २२, २ 22 र २ interesting रोचक ACCELERATE सत्रहरू, उद्योग ब्रीफिंगहरू मार्फत, मलाई डिजिटल ट्विन्सको संसारमा आकर्षित गर्न मद्दत गर्‍यो। वास्तविक संसारमा कसरी चीजहरू लागू भइरहेको छ र ड्राईभि change परिवर्तन, कसरी प्रयोगका केसहरू र अन्तिम प्रस्तुतीकरणहरूले मलाई छोडिराखेको छ भनेर जान्न सधैं तुच्छ। YII- पुरस्कार रात यसको ग्लैमर र मुस्कानको लागि विशेष उल्लेखको आवश्यक छ।
कार्यक्रममा गरिएका मुख्य घोषणाहरू निम्न थिए:
बेंटले प्रणालीहरूले सम्पत्ति र नेटवर्क प्रदर्शनको लागि सम्पत्ति डिजिटल ट्विन सेवाहरू र ओपन युटिलिटी डिजिटल डिजिटल ट्विन सेवाहरू प्रस्तुत गर्दछ।
तपाईंको आफ्नै कक्षाले बेंटले प्रणालीहरूको साथ स्कूल पाठ्यक्रमको सम्बन्धको घोषणा गर्दछ।
बेंटले प्रणाली बहुराष्ट्रिय सदस्यको रूपमा सामेल हुन्छ - डिजिटल जुम्ल्याहाहरूका लागि आईएफसी समर्थनको घोषणा गर्दछ।
बेंटले प्रणालीहरूले पूर्वाधार इन्जिनियरि। डिजिटल जोडाहरूका लागि नयाँ आईटविन क्लाउड सेवाहरूको घोषणा गर्‍यो।
By शिमन्ती पल, परामर्श सम्पादक, जुड़वाँ
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो डिजिटल ट्विन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इञ्जिनियरिंगका लागि नयाँ आईट्विन क्लाउड सेवाहरू
अर्को पोस्ट भू-ईन्जिनियरि & र ट्वीनजीयो पत्रिका - दोस्रो संस्करणअर्को »